Guriga > safarka Europe > Best jiga loo dhan yahay In Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 20/08/2021)
Borgo Egnazia, Talyaaniga
Waxaa loo arkaa mid ka mid ah jiga ugu quruxda badan ma aha oo kaliya in Puglia laakiin dhan of Italy iyo sidoo kale Europe. Borgo Egnazia tiriyaa mid ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe. Borgo Egnazia aad jiidashada doonista la dhaqanka ah style naqshadda aad ka ogaan doonto guud ahaan Puglia, iyo sidoo kale qolalka ay si qurux badan qurxiyey, barkadaha, koorsada golf -ka, iyo xataa naadiyada waxqabadyada loogu talagalay caruur iyo dhalinyarada. Hel si Bari ama Brindisi tareen oo ka dibna u safri Savelletri di Fasano, qaadashada wadada muuqaal dabiici ah si aad u aragto oo dhan quruxda Puglia.
The San Pietro di Positano, Talyaaniga
Italy ayaa meelo badan oo qurux badan si ay u booqdaan, laakiin Xeebta Amalfi waa mid ay jecel yihiin Talyaanigu laftoodu. Oo mid ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe waa xaq waxaa. San Pietro, iyadoo ay 57 qolalka iyo soo jiidasho xeebta-dhinaca makhaayad aad ku farxi doonaa sida ugu badan ee quruxdiisa ee gobolka. Waxaad ballansan kartaa a raacid tareen degdeg yar si aad u hesho in ay Amalfi, ka Naples ama Salerno - oo wuxuu ku raaxaysan views ee jidka.
Best jiga loo dhan yahay ee Europe gacaliye – Club Med Opio Provence, Faransiiska
Hotel Tannenhof, Awstariya
Haddii aad doorbidayso muuqaal buurta halkii daadsan xeebaha, mid ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe si aad u soo booqato laga yaabaa in Austria ee Tyrolean Alps. Hotel Tannenhof views buurta heer faanaa, waana a gurasho ski weyn kuwa ka jecel jawi wax yar ka gaar ah. Waxaad ka Innsbruck gaari karo si fudud Ischgl, Zurich, ama Munich - tareenka aad qaadan doonaa Landeck, ka dib markii taas loo dalxiis tago waa drive gaaban iska.
COR-Resort ee Gobolka quruxda badan ee Bavaria ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe, gaar ahaan marka ay timaaddo bixinta adeegyada sida wiishka barafka iyo qolalka si fiican u qalabaysan.
Barafka waa jiidashada weyn ee Brannenburg, taas oo aad awoodid si fudud u gaaraan tareen ka Berlin iyo magaalooyinka kale ee Jarmalka iyo Europe.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-all-inclusive-resorts-europe%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#All-InclusiveResorts	#allinclusive	#jiga	#safarro	europetravel	talooyin tareenka	tareen safarka	safarka tareenka	safarka